Madaxweynihii hore ee Faransiiska oo sheegay “in uu cadaaban yahay” – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaMadaxweynihii hore ee Faransiiska oo sheegay “in uu cadaaban yahay”
Hiiraan Xog, Mar 22, 2018:- Madaxweynihii hore ee dalka Faransiiska Nicolas Sarkozy ayaa sheegay in eedaymaha soo wajahay eek u aadan in uu lacago uu ugu ol’olaystay doorashada uu ka helay madaxweynihii hore ee Liibiya in ay noloshiisa galiyeen “cadaab”.
“Waxaa la igu eedeeyay wax aan caddayn loo haynin,” ayuu garsooreyaasha ku yiri Sarkozy oo la dul dhigay baaritaan rasmi ah, sida uu ku warramay wargayska Le Figaro.
Waxaa la baarayaa in uu sameeyay ol’ole doorasho oo sharci darro ah sannadku markuu ahaa 2007-dii, in uu sixun u isticmaalay dhaqaale ay dawladda Liibiya lahayd iyo in uu laaluush aqbalay.
Sarkozy oo 63 jir ah ayaa diiday in uu wax khalad ah sameeyay.
Siyaasigan ay aragtidiisu midig dhexe tahay ayaa la siidaayay Arbacadii ka dib markii labo maalmood su’aalo la waydiinayay, wuxuuna sheegay in dadka reer Liibiya ee dacwaynaya ay ka aargoosanayaan maadaama maadaama uu amray in diyaaradaha dagaalka ee Faransiisku ay garaacaan Liibiya intii lagu gudo jiray kacdoonkii Qadaafi xilka lagaga tuuray sannadkii 2011kii.
Brice Hortefeux oo ka mid ahaa golihii wasiirrada ee Sarkozy oo xulafo dhawna la’ahaa madaxweynaha ayaa isna lagu warramay in booliisku ay su’aalo waydiiyeen Talaadadii.
Dowlada Mareykanka oo qorsheynaya inuu cunna-qabateyn saaro dalka Shiinaha